ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၈-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၈-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်ရန်လိုဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- UNA နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေ့ဆုံ (ဓာတ်ပုံ) click
- ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တိုက်တွန်း click
- စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေး တမျိုးသားလုံး ပါဝင်သည့် ညီလာခံ ကျင်းပမည် click
- တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ အချက် ၈ ချက် ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ click
- ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်နှင့် မေးမြန်းချက် (အသံ) click
- RCSS အဖွဲ့ မန္တလေးမြို့ သာရေးနာရေး သျှမ်းအသင်းနှင့် တွေ့ဆုံ click
- ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၌ KIA နှင့် အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဟုဆို click
- TNLA စစ်ဒေသနှင့် KIA တပ်မဟာ ၄ ဒေသတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ click
- မုန်းဂိုးဒေသ အစိုးရနှင့် KIA တင်းမာမှုကြောင့် ရွာ ၄ ရွာမှ ဒေသခံများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ click
- ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်ကလေးများအတွက် အထူးစာသင်ကျောင်း click
- ကချင်နှင့် ရှမ်းမြောက်ကြား မူးယစ်ဆေးဝါး လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား click
- မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး၌ အစိုးရဘက်မှ အဆင်သင့်မဖြစ် click
- KNPP နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးမည် click
- DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း မူလတန်းအထိသာ ပညာသင်နိုင်ပြီး လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေ click
- စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူတွေကို ကူညီဖို့ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော် ကျင်းပမယ် click
- မွန်ခေါင်းဆောင် နိုင်ရော့စကို စစ်အခမ်းအနားဖြင့် သင်္ဂြီုဟ်မည် click
- SNDP ၏ တန့်ယန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန် click
- ALD နှင့် RNDP ပေါင်း၍ “ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ” အဖြစ် မှတ်ပုံတင်မည် click
- ပေါင်းစည်း ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ဆောင်ရွက်မည်ဆို click
- ပါတီငယ် ၅ ခု ပေါင်းပြီး ပီအာရ်စနစ် ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာ click
- လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို လူတန်းစားမရွေး ဖတ်နိုင်အောင် ဖြန့်ချိထုတ်ဝေ (ရုပ်သံ) click
- လက်ပံတောင်းတောင်တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ရုပ်သိမ်းရေး တရားဝင် ဆန္ဒဖော်ထုတ် click
- စစ်တပ်နှင့် ရဲက သိမ်းထားသော မြေများအတွက် သမ္မတထံ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ တင်ပြီး click
- လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြေစာရရန် တဧက သုံးသောင်း ပေးနေရ click
- လယ်သမားနှင့် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်ကုမ္ပဏီ အပြန်အလှန် တရားစွဲ click
- ကလေးခရိုင် ရဲကို နေပြည်တော် အထူးစုံစမ်းရေး ဝင် click
- ကလေးခရိုင် ရဲစခန်းကို နေပြည်တော်ဌာနချုပ်ရဲက ရှောင်တခင် စစ်ဆေး click
- တရားစွဲခံ တော်ဝင်စက်ရုံ အမျိုးသမီးအလုပ်သမား ၅ ဦး အာမခံရ click
- ထန်းတောင်သူများအား လိမ်လည် ငွေကြေးကောက်ခံ click
- အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ဟုဆိုကာ ဆန္ဒပြ click
- မုဒိန်းမှု တားဆီးရေး ဒလတွင် ဆန္ဒပြ click
- ဖယ်ရှားခံရသူများကို ချပေးသည့်နေရာ နေထိုင်ရန်မသင့်ဟုဆို click
- ချောက်မြို့ပေါ်ရှိ မြေအချို့ ဌာနဆိုင်ရာက ဂရမ်လျှောက်သဖြင့် ဒေသခံများ ကန့်ကွက် click
- ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ်မရှိသေး click
- ကျောင်းကုန်း အန်အယ်လ်ဒီ ဦးသက်ဝေကို တရားစွဲ click
- အလဲဗင်းက နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ ၂ စောင်ကို တရားစွဲမည် click
- မလေးရှား ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ မြန်မာလုပ်သားများ မြန်မာအစိုးရသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ဆွေးနွေးထား click
- ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း အကူအညီဖြင့် မလေးရောက် မြန်မာ ၂၅ ဦး ပထမဆုံး ပြန်လည်ရောက်ရှိ click
- နံရံတံတိုင်းများ မလိုအပ်ပါ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- မှားတာကို ၀န်ခံရဲပါစေ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- လူထုဆိုတာ အချဉ်မဟုတ် (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာ့အထည်ချုပ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနောက် မလိုက်ပါနှင့် click
- ပုဂံဇုန် ဝင်ကြေးတိုးမည်ဆိုလည်း နိုင်ငံခြားဧည့်သည် ပိုဝင်ရောက်ဖွယ်သာရှိ click
- အိန္ဒိယမှ နှလုံးနှင့် မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် ကုသပေးရန် စီစဉ် click
- မန္တလေး ပန်တျာကျောင်း ပြောင်းရွှေ့မည်ကို အနုပညာရှင်နှင့် မြို့ခံများ စိုးရ်ိမ် click
- ဘုရားသုံးဆူ ရဲမှ ခိုးမှုကျူးလွန်သူ နိုင်ငံခြားသားတဦးကို ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးစေပြီး နေရပ်ပြန်ပို့ click
- ငွေအတုများ သုံးစွဲမိသည့် ကားပွဲစားတစ်ဦး အမှုဖွင့်ခံရ click
- ရေစကြိုမြို့နယ်တွင် မြစ်ကမ်းများ ပြို၊ အိမ်ခြေ ၁၂၀ ကျော် ရွှေ့ပြောင်း (သတင်းဓာတ်ပုံ) click
- ကြက်သားထမင်း အစားမှားပြီး လူ ၁၅၀ ခန့် ဆေးကုသနေ click
- မှောင်မဲနေတဲ့ မော်လမြိုင် မြို့လျှောက်လမ်းမကြီး (ပေးစာ) click
- ကြော်ငြာချိန် ကပ်လွန်းလို့ အလုပ်လျှောက်ထားသူတွေ အင်တာဗျူးနဲ့ လွဲ click
- ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့၌ ချင်းဂီတဆုပေးပွဲ ကျင်းပ click
- မော်ဒယ်အေဂျင်စီအားလုံး သဘောတူသည့် မော်ဒယ်လုပ်ငန်းစာချုပ်သစ် ပြင်ဆင် click
- ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အလှည့်အပြောင်း ရှိလာနိုင်သလား (စီးပွားရေးဆောင်းပါး) click
- အမျိုးသမီးငယ်များ ပညာသင်ကြားပေးရေးသည်လည်း အခရာကျသည် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ဆင်းရဲတော့မှ ချမ်းသာတော့သည် (ဆောင်းပါး) click
- ကွယ်ပျောက်လို့သွား အစိမ်းရောင် ရပ်ဝန်းများ (ဆောင်းပါး) click
- အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားသင့်သည့် အကျင့်စရိုက်ဆိုးများ (အက်ဆေး) click
- နစ်မြုပ်နေသော ရတနာများ click
- အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတဲ့ ပါကစ္စတန် အမျိုးသမီးတွေ click
All countries know Malaysia isademocracy country.
So Malaysia must find out and sentence the killers of Myanmar workers.Otherwise , same reaction
will come to MALAYSIA.
နယ်စည်ပင်တွေ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲ ဝန်ကြီးချုပ်တွေနောက်လိုက်ပြီး ဖားတဲ့
အလုပ်တွေပဲ လုပ်နေကြတယ် ။
လစာ ညာစားနေတဲ့ အင်အားတွေ % ပဲယူပြီး ဆက်ကြေး ယူနေတဲ့
တိုင်းစည်ပင်ညွှန်မှူး ဒုအင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးတွေ မြိနယ်စည်ပင်က အရာရှိတွေ
အားလုံး ကလေးနဲ့ တမူးက ရဲ တွေလိုပဲ လပ်စားဂိုဏ်းကြီးဖြစ်နေတယ်
ကော်မတီလူကြီးတွေနဲ့ စည်ပ်ဝန်ကြီးတွေ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ
သေချာ စောင့်ကြည့်စီစစ်ဖို့ လိုနေပြီ